Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Bali, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof 7 kalena ay ku dhaawacmeen
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Bali, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof 7 kalena ay ku dhaawacmeen
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay Bali, halkaas oo ay ku dhinteen 3 qof 7 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay XNUMX kalena way ku dhaawacantay dhulgariirka ka dhacay ‘Jasiiradda Illaaha’ ee Indonesia.
Dhulgariir cabirkiisu yahay 4.8 ayaa ku dhuftay jasiiradda Bali ee dalxiiska ee Indonesia wax yar ka hor waaberigii Sabtidii.
Dhulgariirka ayaa inta badan laga dareemay degmooyinka Karangasem iyo Bangli oo ku yaal dhinaca bari ee jasiiradda.
Dhulgariirkii hore ee Bali waxaa ku xigay dhulgariir cabirkiisu ahaa 4.3.
Dhulgariir cabirkiisu yahay 4.8 ayaa ruxay Indonesiajasiiradda jannada ee dalxiiska ee Bali wax yar ka hor waaberigii maanta.
Dhulgariirka ayaa inta badan laga dareemay degmooyinka Karangasem iyo Bangli oo ku yaal dhinaca bari ee jasiiradda, taasoo keentay in dadku ay ka cararaan guryahooda iyagoo argagaxsan.
Sahanka Juqraafiga Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirku ku qiyaasay 4.8, isagoo sheegay in xaruntu ay ku taal meel 62 kiiloomitir (38.5 mayl) waqooyi -bari ka xigta magaalada dekedda leh ee Singaraja oo qoto dheer ah 10 kiiloomitir. Dhulgariirkii hore waxaa xigay dhulgariir cabirkiisu ahaa 4.3.
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, toddoba kalena way ku dhaawacmeen dhulgariirka.
Laba ka mid ah dadka la dilay ayaa lagu aasay dhul-gariir ka dhashay dhulgariirkii, dhibane kale, oo ah gabar saddex jir ah, ayaa waxaa ku dhacay burburka soo dhacay. Dadka dhaawacmay ayaa inta badan waxaa soo gaaray jab iyo dhaawacyo madaxa ah, maamulka deegaanka ayaa sheegay, iyagoo intaas ku daray inay weli ururinayaan xogta khasaaraha iyo burburka.
Bali, oo inta badan loogu yeero 'Jasiiradda Ilaaha', ayaa dib loogu furay dalxiisayaasha caalamiga ah horaantii toddobaadkan kadib 18 bilood oo xannibaadyo loogu talagalay in lagu joojiyo faafitaanka COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, booqdayaasha ajnabiga ah ayaa la filayaa kaliya inay bilaabaan inay ku soo qulqulaan jasiiradda bisha soo socota maaddaama duulimaadyadii tooska ahaa ee caalamiga ahaa aysan weli dib u bilaaban.
Indonesia waa jasiirad aad u ballaaran, oo ku taal waxa loogu yeero 'Ring of Fire'-oo ah fallaadha foolkaano iyo khadadka cilladaysan ee Badweynta Baasifigga-sidaas darteed gariirrada iyo qaraxyada ayaa aad ugu badan ummadda 270 milyan ah.
Dhulgariirkii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ayaa ku dhuftay dalka bishii Janaayo. Waxay lahayd baaxaddeeda 6.2 waxayna keentay ugu yaraan 105 dhimasho iyo ku dhawaad ​​6,500 oo dhaawac ah.